▪ ကျောင်းသားရေးရာဌာန – Technological University (Sagaing)
ထူးချွန်ထက်မြက်၍ အရည်အသွေးပြည့်ဝသော အင်ဂျင်နီယာများကို မွေးထုတ်ပေးနိုင်သည့် နိုင်ငံတွင်းအသိအမှတ်ပြုနည်းပညာတက္ကသိုလ်တစ်ခု ဖြစ်လာစေရန်အတွက် ကျောင်းသားရေးရာကိစ္စများတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန်။
နိုင်ငံတွင်းအသိအမှတ်ပြု နည်းပညာတက္ကသိုလ်တစ်ခု ဖြစ်လာစေရန် အတွက် အရည်အသွေး စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် ( Quality Management System ) နှင့်အညီ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ကျောင်းသား‌ / ကျောင်းသူများ၏ လိုအပ်ချက်များကိုအဆင်ပြေချောမွေ့စွာဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန် ။
နည်းပညာတက္ကသိုလ်( စစ်ကိုင်း ) ကျောင်းသားရေးရာဌာန မှ ကျောင်းသားများ ၏ အမှတ်စာရင်းများ ၊ Grading , GPA ,Transcript တောင်းခံခြင်းများကို သက်ဆိုင်ရာပညာသင်နှစ်အလိုက် တစ်ပတ်အတွင်း ( ၉၀ % ) ပြီးစီးအောင်ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရန်
“ ဟန်ချက်ညီညီ၊ ရှေ့သို့ချဆောင်ရွက်သယ်ပိုး၊ ကျောင်းသားအကျိုး ’’
M.E ( ch.E )
M . E ( EP )
1 ဒေါ်စိမ့်စိမ့်ထိုက် ဌာနမှူး (သင်တန်း) M.E ( ch.E ) ၀၉-၂၆၆၈၆၄၆၆၁
2 ဒေါ်သန္တာနွယ် မော်ကွန်းထိန်း ME ( EP ) ၀၉-၉၇၆၂၉၅၃၁၈
3 ဒေါ်အေးမာချို လ/ထမော်ကွန်းထိန်း B.Sc ( Chem ) Q ၀၉-၉၆၀၃၉၅၆၅၅
4 ဒေါ်ယမင်း ဌာနခွဲစာရေးကြီး( ၁ ) B . A (Geo; ) ၀၉-၂၅၆၁၆၁၀၁၄
5 ဒေါ်ခိုင်မာလွင် ဌာနခွဲစာရေးကြီး( ၂ ) B . A (Geo; ) ၀၉-၄၅၃၈၉၄၂၅၉
6 ဒေါ်မိုးမိုးသန့် အကြီးတန်းစာရေး B.Sc ( Zool ) ၀၉-၇၈၉၃၅၈၁၆၀
7 ဉီးဇော်စိုး စက်မှုကျွမ်းကျင်( ၄ ) E.G.T.I ၀၉-၇၈၉၄၇၄၄၁၇
Total Users : 17019
Total views : 90597